ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်း ရန်ကုန်တွင် ပထမဆုံး စတင်ဖြန့်ချိ | ဧရာဝတီ
ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်း ရန်ကုန်တွင် ပထမဆုံး စတင်ဖြန့်ချိ
လင်းသန့်| December 10, 2012 | Hits:433
12 | | ပထမဆုံး အကြိမ် မြန်မာပြည်တွင်း တရားဝင် ဖြန်ချိမည့် ဒီဇင်ဘာလ ထုတ် ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံး
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့် ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်းကို မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် ယခု သီတင်းပတ်အတွင်း ရန်ကုန်မြို့တွင် စတင်ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်သည်။
ယခု မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ပထမဆုံး တရားဝင် ဖြန့်ချိမည့် ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်းတွင် စာမျက်နှာ ၆၀ ရှိပြီး ခေတ်မီ ရောင်စုံ အရည်အသွေးဖြင့် ယခင်က ဧရာဝတီ မူဝါဒအတိုင်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ပုံနှိပ်ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
မဂ္ဂဇင်း၏ မျက်နှာဖုံးဓာတ်ပုံသည် အမေရိကန် သမ္မတ မစ္စတာ ဘားရက်အိုဘားမားနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့၏ ပူးတွဲ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲလုပ်စဉ်က မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံဖြစ်ပြီး သမ္မတ အိုဘားမား၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးနှင့် ပတ်သက်သည့် မြန်မာ -အမေရိကန် ၂ နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး သတင်း သုံးသပ်ချက်အမြင်နှင့် စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေး မျက်နှာစာ ၂ ခုလုံးအပေါ် သက်ရောက်မှု အကျိုးဆက်များ စသည်တို့ကို ဖော်ပြထားသည်။
မဂ္ဂဇင်း အတွင်းစာမျက်နှာများတွင်လည်း တချိန်က ရန်သူများကဲ့သို့ ရှိခဲ့ရာက ယခုအခါ မိတ်ဖက်များ အဖြစ် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့နှင့်ပတ်သက်၍ သုံးသပ်ချက်၊ ယခုနှစ်အတွင်း ထင်ရှားသူ တချို့၏ စကား ကောက်နုတ်ချက်များ၊ ကာတွန်း၊ သတင်းနှင့် ဆောင်းပါး၊ သုံးသပ်ချက်၊ လူမှုဘ၀ ပုံရိပ်လွှာများ စသဖြင့် ဝေေ၀ဆာဆာ တင်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် ကရင်ပြည်နယ်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားများအကြောင်း စသည်တို့အပြင် ခရီးသွားဆောင်းပါး၊ စားသောက်ဖွယ်ရာများနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာများလည်း ပါရှိသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပါတီ နာယကလည်းဖြစ်သည့် သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်က ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်းကို အကျဉ်းထောင်အတွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အဖြစ် နေခဲ့ရသော ၁၉ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ဖတ်ခဲ့ဖူးသည်ဟု ပြောပြသည်။
“ထောင်ထဲတုန်းကတော့ Time , Newsweek တို့နဲ့ နှစ်အုပ်၊ သုံးအုပ် ခိုးသွင်းပြီး ဖတ်ရတာပေါ့။ ကြာပြီဆိုတော့လည်း ဘယ်အကြောင်းတွေ၊ ဘယ်လိုအဖုံးနဲ့ ဆိုတာတောင် မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ ကျုပ်တို့က လူကြီးတွေဆိုတော့ အင်တာနက်တွေ ဘာတွေနဲ့လည်း မရင်းနှီးတော့ Print version (ပုံနှိပ်မူ)နဲ့ ဖတ်ရတာ ပိုအဆင်ပြေတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဦးဝင်းတင်က ဆက်လက်ပြီး“ဧရာဝတီ က တကယ်ကို ကောင်းတယ် ပြောရမှာပါ။ ကျုပ်ထောင်က လွတ်တော့လည်း ဒီက စာ နယ်ဇင်းတွေကလည်း အကြီးအကျယ် အကန့်သတ်ခံနေရတုန်း ဆိုတော့ ဧရာဝတီပဲ အားကိုးခဲ့ရတာ။ ဒီမှာဖြစ်ပျက်နေတာ တွေ ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထောက်ပြ ဝေဖန်တာကိုးဗျ”ဟုလည်း ပြောဆိုသည်။
ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်း၏ အင်္ဂလိပ်ပိုင်း အယ်ဒီတာ ကိုကျော်စွာမိုးက ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်းကို မြန်မာပြည်တွင်းရှိ စာဖတ်ပရိသတ်များ ဖတ်ကြ ရမည့် မြင်ကွင်းကို တွေးပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်း အခုလို ပထမဆုံး မြန်မာပြည်မှာ ဖြန့်ချိမှုဟာ အစိုးရရဲ့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ် ထားရှိတဲ့ ကတိပြုထားမှု အပေါ် စမ်းသပ်မှု တခုလို့ ကျနော်တို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ကတော့ အရင်အတိုင်းပဲ ဆက်လက် ရေးသား တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေ အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေ ထောက်ပြ ဝေဖန်ပြီး အမှန်တရားတွေကို ဖော်ထုတ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်”ဟုလည်း သူက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက Open News ဂျာနယ် အယ်ဒီတာ ဦးသီဟစောကလည်း“နဂို အတိုင်း ထိန်းထားနိုင်ရင်တော့ ကောင်းမှာပါ။ ဧရာဝတီမှာ ကျနော် အကြိုက်ဆုံးက ဟန်လေး ရဲ့ ကာတွန်းတွေ၊ Feature တွေနဲ့ ဆောင်းပါးတွေပဲ။ တခြားဟာတွေနဲ့ မတူဘူး ဗျ။ သတင်းတို့ ဘာတို့က သူများတွေလည်း လုပ်လို့ရတယ်လေ”ဟု ပြောသည်။
ဧရာဝတီ သတင်းဌာနကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် အယ်ဒီတာ ဦးအောင်ဇော်က တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နှစ်ကုန်ထိ နိုင်ငံ တကာ အဆင့်မီ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် လစဉ် ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အစိုးရများ၊ သံတမန်များ အကြား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်၍ တစုံတရာ သြဇာရှိသော မဂ္ဂဇင်းလည်းဖြစ်သည်။
ထို့နောက်ပိုင်း လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ အထိ ၃ လတကြိမ် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထုတ် မဂ္ဂဇင်းမှာ နောက်ဆုံးထုတ်အဖြစ် ရှိခဲ့ရာက ယခုပြန်လည် ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး ပြန်လည် ထုတ်ဝေခြင်း လည်း ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်း တရားဝင် ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြန့်ချိခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ကာလအတွင်း ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်းသည် မြန်မာပြည်တွင်း၌ ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ခံထားရပြီး တရားမ၀င် မဂ္ဂဇင်းအဖြစ် ယခင် စစ်အစိုးရများက သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
ဦးဝင်းတင် ကျန်းမာရေး အခြေအနေ တိုးတက်လာ
နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက် ဗီဇာ ထုတ်ပေးရေး အစီအစဉ် ပြောင်းလဲ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Aung Khin December 11, 2012 - 12:20 am	What kind of magazine?
Is it interesting liked that other popular magazines?
Reply	မောင်မောင်ကျော်ဝင်း December 11, 2012 - 12:30 am	ဧရာဝတီကိုတည်ထောင်ခဲ့သူမောင်အောင်ဇော်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ဒီသူ
“ဒီချာတိတ်ကမိုက်တော့မိုက်တယ်၊ သတင်းစာကွန်ဖရင့်တွေတက်တဲ့အခါ နိုင်ငံခြားသတင်း
Reply	ဗမာ December 11, 2012 - 4:41 pm	ဒီကွန်မင့်ကိုဖတ်ပြီး ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပီတီဖြစ်ရပါတယ်။ လူဖြောင့်လူတော် ကိုအောင်ဇော် ဦးစီးတဲ့ ဧရာဝတီ ဆထက်တံပိုးအောင်မြင်ပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့ဂုဏ်ကိုဆောင်နိုင်ပါစေဗျာ။
Reply	Maung Maung Myint December 11, 2012 - 1:50 am	Congratulations, Irrawaddy! Hope you will becomealeading English language print magazine in Burma.
Reply	lin linn December 11, 2012 - 3:38 am	Congratulations for your effort to help in Burma democracy transition
Reply	Aung Thein Nyunt January 18, 2013 - 12:33 pm	မြန်မာ သတင်းစာတစ်စောင် လောက် တစ်နှစ် အတွင်း လောက် မှာ ထုတ် ဖို့ ကြိုးစားပါ ခင်ဗျား။